State Counsellor to visit Japan – Ministry of Foreign Affairs
State Counsellor to visit Japan
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, will pay an official visit to Japan in the near future at the invitation of His Excellency Mr. Shinzo ABE, Prime Minister of Japan.
Dated. 29th October 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေး ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မကြာမီကာလအတွင်း တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်။